Daawada dadweynaha | January 2020
Waa maxay faa'iido leh, iyo haddii dhakhtarku waxyeeli karo
Kuwo badan ayaa maqlay dhaqanka noocan oo kale ah sida physalis. Sanduuqyo casaan ah oo aan caadi ahayn, foosto, taas oo miraha geedka ay qarinayaan - waxa ugu horreeya ee aad xasuusato. marka ay ka hadlaan Physalis, waxay ka tirsan tahay qoyska habeenkii. Warshadkan dilka ah wuxuu gaaraa ilaa 50-100 cm oo dherer ah, waxay soo saartaa ubax jilicsan oo ah kareem ama midab caddaan ah, kaas oo ka soo baxa axils of caleemaha iyo Bloom ee August.
Ku saabsan waxa kaliya ee daawada qaran iyo kuwa dhaqameed aanay iman, iyo wixii aan loo baahneyn daaweynta cudurrada. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah habka ugu wax ku oolsan ee sahlan loo heli karo ee loo daweynayo cudurka jirradu waa periwinkle. Kani waa warshad caleen ah oo ka caawin karta qofku inuu la qabsado dhammaan xanuunkiisa.
Digitalis (Digitális) waa cawska reerka qorsheysan. Kala gooyey Mediterranean, waxaa laga helaa Aasiya iyo Waqooyiga Afrika. Halbeegga kiimikada ee digitalis Halabuurka digitalis waxaa lagu dhejiyaa haraaga dabiiciga ah, kaas oo, oo la xidhiidha carbohydrates waxay sameeyaan glycosides. Geedka waxaa ku jira shan qaybood oo kala duwan: digitoxigenin, gitoksigenin, gitloksigenin, digoxigenin iyo diginigenin.
Plekrantrantus fragrant (ciyaaraha, naas) waa geedo digaag ah oo ka mid ah qoyska Yasnotkovyh. Dalka Ruushka, wuxuu ka yimid Koonfur Afrika, sidoo kale wuxuu u qaybiyey Australia. Plektranthus Aromatic: Kombinikada Qaybaha geedka, glycosides, borotiinada, carbohydrates iyo xitaa alkaloids ayaa la kala saari karaa.
Inta badan annaga waa oofin karno sida dhir udgoon. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa ka ogaanaya sifooyinka daawooyinka ee bahalka, taas oo ah burooyinka la qalajiyey ee geedka dhirta, oo la mid ah qaabka yar ee carnations leh caps. Waxaa soo baxday in dawada dalal badani ay muddo dheer ka horba aqbaleen isticmaalka toon for ujeedooyin daaweyn.
Waxyaabaha kiimikada ah iyo isticmaalka oregano
Oregano waa warshad aad u badan oo qashinka ah oo ku baahsan adduunka. Mawduucyadani waxay ku dabooshaa cirifka, cidhifyada, kaymaha iyo meelaha dabiiciga ah. In badan oo dawlad-goboleed, oregano waxaa lagu beeray ujeedada codsiga dheeraadka ah ee sifooyinka kala duwan. Marka loo eego baahida loo qabo dhirtaas, waxay qabatinno, waxay ka duwan tahay tiro ka mid ah caleemaha oo ah mid aan caadi ahayn oo ka mid ah guryaha muhiimka ah.
Potentilla caddaan waa dhir aan caadi ahayn. Waxaa laga helaa oo keliya duurka. Warshad waxaa iska leh Rosy Family, genus Potentilla. Dadka waxaa loogu yeeraa pyatipalnik, pyatipal, derbiga pyatipe. Geedka dhoobada Potentilla wuxuu ku koraa dhererka 8 illaa 25 cm, xididkuna waa mid adag, madow-bunni.
Waa maxay dhirta waxtar leh, ka kooban iyo bogsiinaya sifooyinka geedka?
Parsley waa warshad yar oo biennial ah oo xubin ka ah qoyska dalladda. Dhaqanku wuxuu leeyahay caleenta cagaaran ama cagaar-cagaaran iyo caleemo laba-cagaar ah. Dhulka dhul-beereedka waxaa loo tixgeliyaa xeebta Mediterranean. Dhir ayaa la koray oo dhan Europe, marka laga reebo Scandinavia.
Isticmaalka malayga: faa'iidooyinka iyo dhaawaca caafimaadka
Faaruus - dhoobi ah oo leh xidid awood leh, taas oo la cuno sida dhirta basbaas. Horseradish waa warshad beerta caanka ah, caleemo waxaa loo isticmaalaa alaabta ilaalinta iyo soo qaadashada jiilaalka. Dalbo warshad iyo ujeedooyin daaweyn. Qaybta kiimikada iyo mallaariyada kalooriyada Waa maxay fitamiinada aan ku jirin kaliya malayga!
Boletus faa'iido leh
Xayawaanka qulubka ah ayaa noo soo bandhigay xiliga xagaaga-xilliga dayrta ee loo yaqaan 'macaan' sida hadiyad ah qaabka boqoshaada quruxda badan - subagga. Waxay u qalmaan si ay u jecel yihiin dadka jecel "ugaadhsiga aamusneed" iyaga oo dhadhan fiican iyo dhalid wanaagsan. Fungi Maslyata boqoshaada waxay magacooda ku heleen sababtoo ah daboolka daboolka ah ee dhuxusha.
Khudaarta basbaaska leh waxay ku jiraan ester iyo walxo kale oo karsan. Waxaan kuu soo jeedin karnaa madow. Duufaan madow waa dhir beer dhexe ah, qaabkeeda faa'iidada leh waa mid aan xad lahayn, inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ka horjoogsadeen in ay isticmaalaan. Qalabka daawada ee qamriga madow waxaa loo yaqaan tan iyo wakhtiyadii hore. Ma taqaanaa?
Chervil waxaa loo yaqaanay dhulkeenna illaa iyo waqtiyadii hore waxayna ku magacaabeen cunto fudud, karbel, kupyr. Waxaa loo adeegsaday cuntada iyo sida daaweynta. Maanta, dhirta ayaa sii waddaa in lagu isticmaalo daawada dhaqameed iyo karinta, laakiin sifooyinka faa'iidada leh waxay heleen codsi ku saabsan meelaha kale ee nolosha dadka. Chervil (kupyr): Qeybta kiimikada iyo qiimaha nafaqada ee warshad Chervil markasta waa la ogaan karaa geedaha kale.
Sage waa geedo caan ah oo caan u ah guryaha dawooyinka tan iyo wakhtiyadii hore. Hippokrat waxay tilmaameen sifooyinka wanaagsan ee qoraallada. Lama huraan sageerinta iyo daawada casriga ah. Waxyaabaha ka soo baxa geedo-geedeed ee daaweynta geedi-socodka bararka maqaarka iyo habka neef-mareenka. Maaddada kondhomolojiga, waxaa si weyn loo isticmaalaa sida wakiilka anti-bararka iyo firfircoonida.
Guryaha daweynta ee Chokeberry iyo ka hortagga
Aronia waa madow-fruited, sidoo kale waa buur buur madow - waa geed ama geed oo leh beruud macaan oo udgoon leh, oo aad u faa'iido leh ee hantida. Muuqaalka ballaadhan ee Chernoplodka, inkastoo ay suuqyada faa'iido leh oo la yaab leh, ayaa ahaa mid aad u dhow, oo ku dhowaad boqol sano ka hor, oo uu ku leeyahay dhirta udubdhexaad ah ee Ruush Ivan Michurin.
Khadka cagaaran, faa'iidadiisa caafimaadka, khilaafka iyo waxyeellada suurtagalka ah ee isticmaalka ayaa lagu yaqaanay aadanaha dhawr kun oo sano. Tifafadaha gaarka ah ee ash buurta ah waxay bixisay meel gaar ah ee daawada dhaqameed, karinta iyo kiknoolajiyada. Red Rowan waxay sii wadaa inay soo jiidato dareenka waxayna ku raaxeeysataa caan ka weyn.
Lemon - warshad ka mid ah Citrus jilicsan. Waxay u muuqataa in ay sabab u tahay isku dhafka isbaareysiga, iyo muddo dheer waxay u kobcisay noocyo kala duwan, ka dibna kaliya waxa ay ahayd mid degan oo loo beddelay dhaqan beerta caanka ah (Koonfurta ama Koonfur Aasiya). Maanta warshadani waa mid aan la ogeyn xaalad duurjoog ah.
Wanaajinta sifooyinka malab bocorka, sida loo dalbado iyo kaydi malab ka bocorka
Malabkii Pumpkin, oo muddo dheer loo yaqaanay hantidiisa faa'iido leh, wuxuu ahaa mid ka mid ah waxyaabaha qarsoodiga ah ee dheeraadka ah ee Caucasus. Wuxuu noqday mid calaamad u ah caafimaadka iyo awood jireed. Maanta, dad badan ayaa ku soo laabanaya asaasiga, iyagoo isticmaalaya sheygan si loo bogsiiyo. Ma taqaanaa? In Maraykanka, malab bocorka ah sida caadiga ah macaan macaan iyo cocktails.
Ledum ayaa baxa marshiinka: isticmaalka, guryaha dawooyinka iyo ka hortaga
Marsh Labrador shaaha - warshad sun ah oo ka samaysan qoysaska heather. Ledum badanaa wuxuu ku baxaa Yurub, North America iyo Aasiya. Warshadu waxay leedahay qaabdhismeedka baadiyaha oo xoog leh oo gaadhaya heerkul aan ka badnayn 120 sentimitir. Carafka duurka duurjoogta duurjoogta ah aad buu u egyahay urka xayawaanka.